Mendrika azy amin'ny bisikilety ve ny freins disc? - Bisikileta
Tena > Bisikileta > Frein ny bisikileta an-dàlana 2016 - ny fomba fitantanana
Frein ny bisikileta an-dàlana 2016 - ny fomba fitantanana
Mendrika azy amin'ny bisikilety ve ny freins disc?
tsara kokoafreinsfahefana -Freins dischiteraka mihoatra lavitrafreinshery noho ny sisin-tany mahazatrafreins. Fiakarana haingana kokoa - Heverina fa izanykapilanotapahinybisikiletaafaka manome dia haingana kokoa. Satria ny mpitaingina dia hanana fahatokisana bebe kokoa aryfreinshery amin'nykapilaafaka mamaky faratampony izy ireo aoriana kely noho ny raha mampiasa rimfreins.
Toa tsy azo ihodivirana nandritra ny taona maro fa ny frein-kapila no manjaka amin'ny famaritana ny bisikileta vaovao. Ary heveriko fa eo amin'io fotoana io isika izao. Sambany aho no nahazo nampiasa sety tamin'ny bisikileta.
Ary tena mahaliana ahy ny mahalala aloha ny zavatra tsapanao, fa koa raha toa isika mpitaingina bisikileta handray soa amin'izany mandritra ny fotoana maharitra. Ny faritra iray izay toa tsy mifanaraka amin'ny mpamokatra bisikileta amin'izao fotoana izao dia ny fomba ampiarahin'ny kodiarana amin'ny bisikileta. Ary amin'ity Trek Domane ity dia ahitanao zavatra iray izay tena mahazatra ny bisikileta an-tendrombohitra maro, izany hoe ny thru-axle system.
Ka raha tokony halefa haingana dia tsy maintsy esorinao io. '' Ka ny azonao dia mivoaka ny famaky rehetra, ary avy eo mivoaka ilay kodiarana. Midika izany fa ny kodiarana dia henjana kokoa amin'ny endriny ary ny kapila dia mipetraka eo amin'ny toerana mitovy.
Satria manana fahefana tsara avy amin'ny sakaizantsika Kay Frecks, tonian-dahatsoratra teknolojia ao amin'ny VeloNews, aho fa ny iray amin'ireo olana manimba ny kapilan'ny bisikileta rehefa misy famoahana haingana dia ny mitabataba tokoa izy ireo, zavatra izay tsy ho hitanao mihitsy Fantaro fa nandeha bisikileta an-tendrombohitra ianao, nomena ny tabataba sy ny tabataba rehetra ataon'ny bisikileta. Ny tena izy dia ny kapila iray dia afaka mametaka amin'ny pads ary amin'ny farany dia hay ho raketa, izay tsy mahazatra antsika amin'ny bisikileta mihazakazaka. Mba hivezivezena eo dia mamaha io olana io amin'ny famaky.
Heveriko fa ny fanontaniana voalohany hiresahana amin'ny freins disc dia ny fampisehoana. Ankehitriny ianao dia afaka manao freins kapila matanjaka araka izay tadiavinao, saingy mazava ho azy fa amin'ny bisikileta amin'ny hazakazaka dia azonao atao tsara ny mamaky. Ny fiheverako voalohany an'io dia ny hoe tsy voatery ho matanjaka noho ny frein de rim izy ireo.
Ny azonao anefa dia ny fanodinkodinana bebe kokoa. Raha fintinina, ny misintona ny lever eo anelanelan'ny freins vao manomboka ary avy eo manidy ny kodiaranao dia goavana, lehibe kokoa noho ny frein rim. Noho izany dia manana fifehezana bebe kokoa ianao.
Mety tsy mampaninona antsika izany amin'ny làlana asphalt mahazatra, fa rehefa mando io fanodinana fanampiny io dia tena hahasoa anao ary hanome anao fifehezana bebe kokoa amin'ny bisikileta. Heveriko fa ny fahitana mialoha ny mando no zavatra lehibe indrindra amiko. Eny, raha miaina amin'ny toetrandro maina ianao, ary mitsiriritra anao aho raha manao izany, dia mety tsy ho lehibe noho ny fandrosoanao izany, fa ny dia maro ataoko dia mety ho avy ny orana iray ny tena tombony azo dia ny manana freins izay mahatsapa tena mitovy, na lena na maina.
Ary tadidiko ny fotoana tamin'ny hazakazaka izay nampiasako ny kiran-karibonika tamin'ny lena ary novakivakinao ary tsy nisy nanjo. Miaraka amin'ny kapila, tsy toe-javatra sendra anao fotsiny izany. Ho ahy ity dia zavatra goavambe, teboka miampy goavana.
indostria kodiarana arabe sivy
Eny, zavatra iray hitako fa hafahafa izay tsy noeritreretiko hatramin'ny nandaniako fotoana be dia be tamin'ny bisikileta an-tendrombohitra miaraka amin'ny frein disc dia ny hatsaran'ny fitiavako endrika ny bisikileta misy frein disc fa rehefa mijery ambany aho dia tsy tsy mahita an'izany amiko mitady bisikileta fifaninanana. Tsy olana izany amin'ny tenany, fa ny bisikileta iray manontolo dia tena mahatsapa tena hafa be amiko. Vetivety dia vitako ilay izy, saingy amin'izao dia tsy toy ny bisikileta mihazakazaka fotsiny aho izao.
Angamba misy mila mandresy ny Tour de France amin'ny iray. Ny zavatra iray hafa tiako be dia be momba ny frein disc, indrindra ity Trek Domane ity dia ny fananako lever hidy, ka manana Di2 miampy kapila hydraulic aho, ka tsy misy tariby amin'ity bisikileta ity. Eny, tsara ho ahy fotsiny izany, saingy misy ny olana amin'ny telegrama sy ny tariby vaky.
Izy ireo dia iray amin'ireo zavatra mahasosotra indrindra tsy mandeha amin'ny bisikileta matetika, ary indrindra rehefa any amin'ny lena izy, ny fanesorana ny malt miaraka dia mahasoa. Heveriko angamba fa mipetraka ny fanontaniana, mendrika izany ve ny freins disc? Eny, miankina betsaka amin'ny toerana misy anao izany. Raha mitondra fiara any amin'ny faritra antonony toa an'i Angletera izy ireo dia hisy fiovana lehibe heveriko fa.
Raha nipetraka tany atsimon'i California aho, ary iriko ny hitrangako, dia tsy azoko antoka tanteraka fa hisy fiovana lehibe amin'ny fandehan-dry zareo izany. Eo ihany koa ny fanontaniana raha te hampanjavona ny bisikiletanao taloha ianao. Hivarotra ny bisikiletako ve aho izao hividy iray amin'ny mpanasa lamba? Tsia, tsy amin'izao fotoana izao, fa raha mividy bisikileta hafa aho atsy ho atsy, hanana freins disc ve izany? Marina tokoa.
Homeko lanja izany. Ny fomba fiteny taloha amin'ny bisikileta dia milaza fa raha te ho haingana dia tokony ho afaka hijanona haingana ianao. Ny freins dia fahaizana sarotra, na izany aza, ka izao ny fomba fanaovana azy.
Ny freins eo aloha no namanao. Ie.
Azoko atao ve ny mametraka preno disc amin'ny bisikiletako?
afakaMety ahokapilaamin'ny efa misybisikileta? Sady nentin-drazanalalanany foibe, na ny zana-kazo, dia misy fepetra arahana manampykapila. Tsotra, tsia.Kapilany calipers vaky dia mitaky teboka manokana eo amin'ny fork sy ny frame, raha ny kodiarana kosa mila hubs manokana izay itondrana ny rotorafakaapetraka.23 2018.
fitsidihana bisikileta trek
Mandra-pahoviana no misy ny pad freins amin'ny bisikileta an-dalambe?
Azonao atao ny manantena ny hahazo 500-700 kilaometatra amin'ny resinapad freinsary 1.000-1.250 kilaometatra avy amin'ny vy metatrapad freins. Na izany aza, ohatrinona ny kilaometatra azonao farany amin'ny anaopad freinsdia hiankina amin'ny toetry ny toetrandro alehanao, ny faritra mitaingina anao ary ny anaofreinsfahazarana.
Ny freins de disc dia eto hijanona, ary na dia haharitra elaela aza ny pads dia mila soloina ihany izy ireo amin'ny farany. Anio dia andao jerena akaiky ny fomba fanaovana izany rehefa tonga ny fotoana, asa mahafinaritra sy mora izy io. (mozika elektronika mampihetsi-po) (mozika dihy malefaka) Amin'ny ankapobeny dia te-hanolo ny kapilan'ny kapila ianao rehefa misy 1 1/2 milimetatra na karatra roa sisa tavela amin'ny takelaka tena izy.
Ekena fa sarotra be ny refesina marimarina sy marimarina, fa ho an'ny vidiny ambany amin'ny paoma vaovao dia tena mendrika ny ho eo amin'ny lafiny azo antoka izy ireo rehefa hisolo azy ireo. Izy ireo dia manana endrika sy habe samihafa, saingy mila ny mety ho an'ny kaliperinao ianao. Tsy misy habe mifanaraka amin'ny rehetra raha ny antony ahazoanao vintana indraindray ary ao ambadiky ny valin-drakitra misy anao dia manana nomerao na isa maromaro ianao fa raha tsy mijery fotsiny amin'ny Internet dia manandrama mitady endrika mitovy, ary koa alao antoka fa mifanaraka amin'ny kaliperinao izy io hanampy anao amin'ny pad tena ilaina.
Ilaina ihany koa ny mandinika ny mijery ny tena rotor azy manokana ary manamarina fa natao ho an'ny firafitry ny kapila fametahana kapila manokana. Raha izany dia alao antoka fa mifikitra amin'ny fampisehoana freins faratampony ianao. (mozika dihy malefaka) Ny fizotry ny fanesorana sy fanoloana pads dia tena mahitsy, izay vaovao tsara omena anao ny fitazomana ny fikojakojana anao sy ny fampiasana fitaovanao mendrika.
Ny antony ilazako izany dia satria ny visy kely izay mitazona ny pads eo, eny, misokatra ho azy ireo amin'ny singa rehetra izy ireo, ary tena kely ny lohan'ny hex wrench dia misy harafesiko kely aho, inona no nitranga ao dia mety hisy fanaintainana amin'ny boriky, minoa ahy. Ka zavatra hatolotroiko foana dia ny manaisotra ny visy kely tena izy amin'ny tsy tapaka ary apetaho eo fotsiny ny diloilo alohan'ny hamerenanao azy io, mazava ho azy fa azonao antoka fa mitazona ny pad sy ny rotor ianao mandritra ny dingana, fa iray ny fikarakarana kely etsy sy eroa dia hahatonga ny asa ho mora kokoa hatrany. (mozika dihy malefaka) Ny zavatra voalohany tianay hatao dia ny manala ny kodiarana.
Ary io fitsipika io ihany no mihatra amin'ny eo aloha sy eo aloha, fa anio kosa isika manao ny eo aloha. Esory fotsiny izy ireo, ary mazava ho azy fa tena manampy tokoa rehefa mampiasa fonon-tànana roa toa ireto ianao. Tamin'izany no nanesorana ireo tavy voajanahary izay tena eo am-pelatananao.
Ny tananao na ny rantsantananao dia tsy handoto ny valin-drakitra na ny kapila vita amin'ny frein, izay mazava ho azy fa mety hitarika amin'ny tabataba mahatsiravina ary koa ny fahombiazan'ny fampisehoana. Ankehitriny tsy azontsika intsony ny kodiarana sy ny kapila. Azontsika atao ny manara-maso akaiky kokoa ny mekanika tena izy, raha tianao, ao ambadiky ny fifamatoran'ireo pads ao anaty caliper.
Ka amin'ity tranga ity dia manana pin isika izay miraikitra ao anaty caliper eto ary misy foibe hexagon kely izay avy eo mamakivaky ny pads ary avy eo misy kofehy mankamin'ny ilany mifanohitra amin'ny caliper, eto koa misy clip kely kely izay tsy maintsy esorinao. Mazava ho azy fa tsy ny rafitra rehetra dia noforonina nitovy, fa tamin'ny ankapobeny, raha mbola tsy voavidinao ny zava-drehetra, dia azonao atao ny manamarina sy mahita hoe manao ahoana izany. Tena lojika be, ary amin'ny ankamaroan'ny tranga, tsotra be.
Ny zavatra voalohany tianay hatao dia ny manala an'ity clip kely kely ity eto. Manampy amin'ny fanaovana pliers kely hahafahantsika mamoaka azy ireo mora foana. ary avy eo isika dia afaka mamily tsotra izao amin'ny làlan'ny fenitra amin'ny alàlan'ny lakilen'i Allen ary mamaha ny pin hidy.
Tehirizo amin'ny toerana azo antoka izy io. Miankina amin'ny karazana caliper frein, dia miankina amin'ny fanesorana ireo pads avy eo izao. Na inona na inona ataonao dia aza mampiasa hery satria tsy mila mampiasa hery hanesorana azy.
Zahao indray raha tsy misy loharano na clip kely mitazona azy ireo amin'ny toerany. Amin'ny ankapobeny, na izany aza, ny ankamaroan'izy ireo amin'izao andro izao dia fomba tsara sy mora hidirana sy hivoahana. Handray plastika-orona aho ary azoko atao fotsiny ny manosika azy ireo mandroso sy miverina.
Ankehitriny dia hitako mora ny lalana tokony halehany, fa misy molotra kely ao ambadiky ny takelaka tena mitondra ny pad, izay mipetraka eo an-damosina ao anaty caliper frein. Ka ilaina ny mampiasa fotoana kely alohan'ny hanandramana hanery azy amin'ny fomba tsy mety. Ary tsotra, raha vantany vao avoakanao izy ireo, raha tsy tsara izy ireo dia azonao atao ny manary azy ireo, fa hazony foana ireo volom-borona kely ireo rehefa manana azy ireo ianao satria tsy fantatrao hoe rahoviana no mila azy ireo indray ianao.
Ankehitriny rehefa tsy ao anaty caliper ny pad freins dia tsy maintsy ataontsika izay hidiran'ny piston-namboarina indray ho ao anaty caliper ihany, ny antony mahatonga ireo piston ireo hanana herinaratra AC, dia nanakaiky kokoa ny tsipika afovoany isika tsikelikely hiatrehana ny tsy fisian'ny fitambaran-javatra izay teo amin'ny takelaka famaky izay nesorinay fotsiny. Ka rehefa mametraka vaovao isika dia mazava ho azy fa mila an'io toerana fanampiny io indray isika, koa makà zavatra toy ny arofanina kodiarana ary atosika hiverina any amin'ny toeran'ny caliper. Tandremo sao mampiasa zavatra maranitra mety hanimba ireo singa. (mozika dihy malefaka) Ny fametahana ny pads dia mamadika ny fanesorana azy ireo fotsiny.
kennel sy fahasalaman'ny fo
Ka alohan'ny hametrahana ireo pad eo amin'ny toerany aloha. Miditra tsara sy mora ianao ao. Ary avy eo dia tiako apetraka ao koa ny tsimatra fanidiana.
Hamafiso izy ireo satria mety hiteraka olana izany any aoriana. Raha misy fisalasalana, jereo ny torolàlana momba ny fiasan'ny mpanamboatra anao. Ary avy eo ny ampahany farany dia clip kely matetika fiddly eto.
Ankehitriny ny anton'izany dia karazana failover, koa raha toa ka maneno ny penina amin'ny fomba somary malalaka dia eo io mitazona azy io eo io toerana io ka aza hadino ny mampiasa azy. Ary farany, te-hamory ny kodiarana indray izahay alohan'ny hanomezana paompy roa ho an'ny paosin-drakitra mba hahazoana antoka fa mivoaka avy ao amin'ny caliper ny piston ary milay tena - mifantoka amin'ny rotor. Ary alohan'ny hiainganao dia ataovy ao anaty rotor mazava ho azy ireo freins ireo, avy eo freininao, avy eo avereno im-betsaka ity dingana ity ary avy eo somary haingam-pandeha fotsiny mba hahazoana antoka fa mety daholo ireo pad.
Eto izahay, pad frezy vaovao ao anaty kaliperao. Raha izao, raha misy soso-kevitrao momba ny lahatsoratra amin'ny Alatsinainy Maintenance dia avelao izy ireo ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany ary aza adino ny mankafy an'ity lahatsoratra ity ary zarao amin'ny namanao, omeo ankihiben-tànana lehibe eo, ary aza adino ny Fivarotana GCN Tsidiho ny shop.globalcyclingnetwork.com raha mila lahatsoratra iray hafa momba ny freins de disc ary torohevitra fikolokoloana frein dimy, ahoana ny tsindrio eto ambany.
Inona avy ireo lesoka amin'ny frein disc?
nyfatiantoka ny frein discmihoatra ny tombony; lafo izy ireo, mavesatra noho ny caliperfreins, manahirana kokoa ary mampiakatra olana mifanentana.Kapilany kodiarana dia tsy handeha amin'ny bisikiletanao ankehitriny, ary ny mifamadika amin'izany. Eo ihany koa ny mety hisian'ny olana amin'ny fiparitahan'ny hafanana amin'ireo fidinana lava.
Miala ve ny freins de rim?
Jereo ny laharan'ny bisikileta misy ny marika 2021, ary ho hitanao ny fironana iraisana iray: samy manana kapila avokoa izy ireofreins. Tsy tokony hahagaga izany. Sady koa anie,vaky rimbisikileta feno fitaovana efa nihena nanomboka tamin'ny 2011, rehefa kapilafreinsniseho tamin'ny bisikilety voalohany.
Azonao atao ve ny manatsara ny rem-by mankany amin'ny freins disc?
Freins discmihombo hatrany amin'ny tsenan'ny bisikileta, aryizanyTena azo atao izao ny manova ny fenitry ny mpitahiry anaovaky rimzana-lalana mankany anaty fifangaroan'ny hybridnovakiny kapilaaloha aryvaky rimaoriana.
Azonao atao ve ny manova ny freins ho an'ny freins?
Azo atao izanyianao dia afakaampiasao ny brifters misy anao IFianareomisafidy tariby mihetsikakapila kapilacaliper. Na izany aza rahaianareohandeha amin'ny lalana rehetra,ianareomila brifters fanoloana amin'ny hydraulicnotapahinyfanohanana, mifanaraka amin'ny fanamboaranao fitaovana efa misy. Satroka tavoahangy sy fanampiana amin'ny ankapobeny ny faritra mora vidy indrindra abisikileta.
Firy kilometatra ny faharetan'ny freins?
Famerenana:notapahinyfisaka sy mivelatratokony haharitrana aiza na aiza eo anelanelan'ny 25,000 sy 60,000an'arivony, miaraka amin'nykapila novakinymaharitra eo anelanelan'ny 80,000 sy 120,000an'arivony.
Azonao atao ve ny manolo ny freins disc amin'ny freins de rim?
Tsara kokoa ve ny freins disk?
Freins discmanolora herinaratra fijanonana lehibe kokoa, izay mety hanampy amin'ny fidinana lava.Freins discmamela ny marimarina kokoafreins, mahatonga ny fanidiana kodiarana tsy dia inoana loatra.Freins discasatsara kokoanoho ny sisinyfreinsamin'ny toetr'andro mando. Ny fanovana haben'ny rotor dia ahafahanao manamboatra ohatrinonafreinsfahefana tadiavinao.
fanafanana tanana bisikileta
Misy bisikileta an-dalambe izay misy frein disc?
Anisany izany noho ireo mpanamboatra bisikileta mamadika ny vokatra avoakany saika ho an'ny freins disc ihany. Fa na ny ekipa, toa ny ekipa Emirà Arabo Mitambatra Emirà Arabo, izay manana safidy ary mitaingina bisikileta vita amin'ny sisin-tany tamin'ny taon-dasa dia nanao izany fanodinana izany ho any amin'ny frein disc.
Iza amin'ireo no freins disc kokoa na frein hidraulika?
Ny freins ampandehanana tariby dia mora vidy kokoa ary tsy dia mahomby kokoa noho ny frein hidy hydraulic noho ny fikororohana sy ny fivezivezena ao anaty tariby, ary matetika no hita amin'ny bisikileta misy vidiny ambany kokoa. Iza no manao frein disc?
Ny fiaretana Ribble ve dia bisikileta kapila?
Ny Ribble Endurance no fidiran'ny marika amin'ny tsenan'ny bisikileta mihazakazaka eny an-dalambe. Nilaza i Ribble fa ny telozoro aoriana tsy misy simetrika dia nohamafisina tamin'ny andaniny roa mba hanoherana ny hery ateraky ny kapila kapila sy ny drivetrain, fa ny forkana fibre karbaona kosa dia namboarina mba hiatrehana ny frein disc.